Mpanefa vy sy vy fandrefesana mpamatsy sy ozinina - Mpanefy vy sy vy fandrefesana mpamokatra
Takelaka vy nopotehina tanana nopotehina
Takelaka vita amin'ny vy namboarina tanana (1) Mety amin'ny fanaraha-maso isan-karazany sy ny fiaramanidina benchmark an'ny fandrefesana ny marina. (2) Nampiasaina be dia be ho toy ny mari-pandrefesana fandrefesana ny fitaovana fanaovana masinina ary hijerena ny refy refy na ny tsy fitoviana amin'ny fiasan'ny tsipika marina. (3) Izy io dia fitaovana fandrefesana tena ilaina amin'ny famokarana masinina. Ny takelaka vy vita amin'ny vy ampiasaina indrindra amin'ny milina, orinasa mpamokatra birao fitaovana, elektronika, herinaratra elektrika, ...
Ny takelaka fametahana vy dia ampiasaina betsaka amin'ny fametahana tanana ny faritra ferrous sy tsy ferrous hahazoana endrika endrika tonga lafatra sy fisaka fisaka vy-vy dia matetika ampiasaina amin'ny gorodona famokarana ho fitaovana hitrandrahana takelaka granita hahavitana azo antoka naoty marina. Ny metaly dia mamela azy hofenoina amin'ny alàlan'ny haino aman-jery misolelaka ambonin'ny velarana lehibe iray. Ny velarana dia mety ho faritra marefo amin'ny fisolahana, ny fanamarihana ary ny fisehon-javatra. Ny surf ambony koa ...
Ny takelaka vy vita amin'ny vy dia namboarina ny takelaka vy / vy misy gorodona vita amin'ny vy dia ampiasaina ho toy ny fotodrafitrasa henjana sy marina amin'ny indostrian'ny injeniera ho an'ny benchmarking, layout, fandrefesana, ny asan'ny fiangonana, ny fametrahana asa ho an'ny fivorian'ny fitaovana, ny refurbishements sns. Ny takelaka vy dia azo ampiasaina ho takelaka fandriana ho an'ireo fikosoham-bary mankaleo, milina fanodinana / familiana sns ... Izy ireo koa dia ampiasaina ho fandriana fandramana hanohanana ireo motera, motera, compresseur, paompy, valves, milina lehibe, transm ...